कुन प्रदेशमा कति ? सात प्रदेशमा तत्कालै तीन सय ३६ गाडी आवश्यक – MeroJilla.com
कुन प्रदेशमा कति ? सात प्रदेशमा तत्कालै तीन सय ३६ गाडी आवश्यक
प्रदेश १ मा तत्काल ५० गाडी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये केन्द्र सरकारले १३ वटा गाडी उपलब्ध गराउने भएको छ । बाँकी गाडी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रमुख सचिव यादव कोइरालाले बताए । अहिले प्रदेशमा एउटा पनि गाडी नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश ५ मा अहिलेसम्म कतिवटा गाडी आवश्यक पर्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । केन्द्र सरकारले तत्काल सातवटा गाडी पठाउन लागेको पत्र प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव जितेन्द्र काफ्लेले बताए ।
प्रमुख सचिव काठमाडौंमा रहेकाले आवश्यक गाडीको संख्या निश्चित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले ६ वटा मात्र मन्त्रालय रहेको स्थितिमा करिब ४० वटा गाडी तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । तर, मन्त्रालयको संख्या वृद्धि भएमा त्यहीअनुसार गाडी संख्या थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सचिव काफ्लेले प्रदेशमा अहिले जम्मा दुईवटा गाडी रहेको बताए ।
प्रदेश ७ ले सुरुकै दिनमा कम्तीमा ४५ वटा गाडी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । त्यसमध्ये मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि आवश्यक पर्ने गाडीका लागि केन्द्र सरकारको भर परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए । ४५ वटा गाडी मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, प्रमुख सचिव, सचिवहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । तर, अहिलेसम्म चारवटा मात्र गाडी उपलब्ध भएको कँडेलले बताए । प्रदेश ७ मा ११ जना मन्त्री भएमा कम्तीमा ४५ वटा गाडी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिकाबाट